Marc Ravalomanana : « Filan-kevitry ny minisitra sy ny Faritra…” -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : « Filan-kevitry ny minisitra sy ny Faritra…”
29/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafiditra ao anatin’ny programan’asan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana ny fanomezana lanja ny Faritra 22 mba ho fitsinjaram-pahefana tena izy amin’izay no misy eto amintsika fa tsy sarintsariny tahaka ny taloha. Hisy rafitra telo araka izany ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra araka izao manaraka izao…
Filankevitry ny Minisitra sy ny Filankevitry ny Governemanta… Ireo no rafitra nisy hatramin’izay mandray ny fanapahan-kevitra rehetra mikasika ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny sy ny fitantanam-bola. Mitondra fanavaozana goavana manoloana izay rafitra mpanapa-kevitra izay ny kandidà laharana 25, Marc Ravalomanana ka hametraka ny antsoina hoe “Filankevitry ny minisitra sy ny Faritra” ho fahefana faratampony eo amin’izay fandraisana fanapahan-kevitra izay, ka ny filoham-pirenena no mitarika azy. Izany hoe, hiaraka hanapa-kevitra amin’ny filoham-pirenena sy ny governemanta ireo lehiben’ny Faritra.
In-droa isan-taona no hanatanterahana ity “filankevitry ny minisitra sy ny Faritra” ity ka ny alarobia fahatelon’ny volana Janoary no hanatanterahana ny fivoriana voalohany izay handinihana politika ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-panabeazana, ara-panajariana ny tany, ara-pivoarana sy ara-pandrosoana, sns. Ny alarobia faharoan’ny volana Septambra manaraka kosa dia ny fitsarana ny tetibola mialohan’ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena momba ny teti-bolam-panjakana.
Manatrika ireo fivoriana roa ireo mandritra ity “filan-kevitry ny minisitra sy ny Faritra” ity amin’ny maha mpanolotsaina sy teknisiana azy ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara, ny Tale jeneralin’ny Teti-bolam-panjakana, ny Tale jeneralin’ny Kitapom-bolam-panjakana, ny Tale jeneralin’ny Hetra ary ny Tale jeneralin’ny fadin-tseranana. Ny filoham-pirenena dia afaka mampiantso fivoriana tsy ara-potoana ho an’ny “filan-kevitry ny minisitra sy ny Faritra” miaraka amin’ny lohahevitra hodinihana amin’izany.
Nitrangana savorovoro teny Antaninarenina omaly. Tonga teny an-toerana saika hamoaka ireo mpiasa miasa tamin’ireo minisitera roa, ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola sy ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra mantsy ireo mpitolona avy etsy amin’ny ...Tohiny